Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai? tallaabooyinka lagu helo shaqo! 🥇
Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai? 🥇
Shirkadaha Hotel ee Sri Lanka - Hagaha Shaqada
Shaqooyinka ammaanka ee Dubai ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah 🥇
Published by Shirkadda Dubai City at April 22, 2018
Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai? Tani waa su'aal aad ka jawaabeyso. U soo guurista Dubai annaga hage faahfaahsan oo loogu talagalay dadka ajnabiga ah. Iyadoo sannado badan oo khibrad u leh suuqa shaqaaleynta. Hadda ayaa soo saaray tilmaan faahfaahsan oo ku saabsan sida shaqo looga helo Dubai. Waxaa jira shaqo doon badan oo caalami ah. Dhammaantood waxay raadinayaan inay shaqo ka helaan Dubai. Iyadoo la raacayo hageheena faahfaahsan, waxaad kordhin doontaa fursaddaada. Waxa jira waxyaabo yaryar oo aad u baahan tahay inaad raacdo. Guud ahaan hadalka, raadinaya shaqo Bariga Dhexe waxay qaadan doontaa dadaalkaaga iyo waqtigaaga. Kooxdayadu waxay kuu diyaariyeen hagid faahfaahsan.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdeena ayaa caawinaysa Qurba-joogta cusub si ay u aqoonsadaan UAE. Guud ahaan hadalka, waxaad uga baahan doontaa Macluumaadka A ilaa Z ee markaad u soo guurto Dubai. Dhammaan macnihiisu waa, haddii aad jeclaan lahayd in aad u noqotid qof qurbo jooga ah Bariga Dhexe. Waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad raacdo annaga Hagaajinta 10 ee raadinta iyo u guuraaga Dubai. Kooxdeena had iyo jeer oo gacan siinaya dadka shaqo doonka ah ee Dubai, Abu Dhabi, iyo Sharjah.
Waxaa jira dhowr qaybo gaboobay oo macluumaad ah khadka tooska ah. Gaar ahaan baloogyada hore sida loogu soo guuro Dubai shaqo. Kooxdayada takhasuska leh waxay sugayaan kaa caawinaya raadintaada shaqo. Shirkadda Magaalada Dubai waxay ku guuleysatay inay hesho macluumaad ku saabsan raadinta xirfadda ee Dubai. Ilaa iyo inta sida Fiisaha looga helo Dowlada UAE. Waxaa intaa dheer sida loo qoro duullimaadyada iyo sida loo helo guri lagu dego Imaaraadka Carabta. Tilmaantaan faahfaahsan ayaa inta badan ah loogu talagalay dadka ku nool dibedda iyo shaqo ka raadsanaya UAE.
Tallaabada No.1 Helitaanka barashada Dubai
Dubai waa mid ka mid meelaha adduunka. Gaar ahaan shaqo doonka. Waxaad ubaahantahay inaad ogaatid halka Magaalada Dubai ay ku taal. Waa maxay waxa ugu jecel bariga dhexe ?. Ma a warshad hotel ama Saliida iyo Gaaska, qaab dhismeedka magaalada oo dhan? Dhanka kale, waxaad ubaahantahay inaad ogaato magaalada Dubai. Wuxuu si fiican u yaqaanaa hiddaha dhaqanka ee cajiibka ah. Intaa waxaa dheer, dadka ku nool Bariga Dhexe waa soo dhaweyn kasta oo booqda UAE. Dabcan, Muslimiinta shaqo doonka ah ee ka yimid Pakistan. Habka jacaylka ah ee Dubai wuxuu u yahay dhaqan dhaqan oo loogu talagalay dadka cusub. Waxyaabo kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato waa in Imaaraadka uu yahay kan sare.
Dubai waa diinta Islaamka iyo mid kasta socdaal cusub waa in ay qaataan tan sanadka noloshiisa qoraxda. Guji sawirka hoose. Oo ogow waxaad u baahan tahay si looga ogaado Dubai. Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai?. Dhab ahaantii waxay ku xiran tahay meesha aad ka timid. Inta badan dadka ka yimid Yurub iyo Kanada way awoodaan inay helaan fiiso. Aad ayey u adagtahay waxaa loogu talagalay dadka ajnabiga ah ee Hindiya.
Tilaabada No.2 Warbixinta UAE iyo fiisada
Si lamid ah muhiim inaad garato Dubai. Waa in la ogaado haddii aad xaq u leedahay soo gelitaanka Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, ka hor inta aanad qorsheynin safarka UAE. Waa inaad fiirisaa baasaboorkaaga iyo shuruudaha fiisahaaga. Isla mar ahaantaana, waxay noqon doontaa dhaqaaqa caqliga leh. Ka badan boqolkiiba boqol hubi in taasi si badbaado leh ayaad u safri kartaa.
Miyaan u baahanahay fiiso Dublamaasiyadda Dubai?. Haa, waxaad u baahan tahay inaad haysato fiiso diyaar ah gacantaada markaad soo degayso UAE. Waxaa intaa dheer, waa inaad dalbataa oo aad fiirisaa macluumaadka fiisada UAE. Shirkada diyaaradaha ee Emirates ayaa kuu soo bandhigtay dhammaan xogtaada. Sidaas darteed waa inaad si taxadar leh u akhridaa, oo aad ogaatid waxa aad u baahan tahay marka loo eego safarka.
Inta badan wadamada loo baahan yahay in la haysto fiiso ansax ah haddii loo baahdo. Iyo inaad haysato baasaboor shaqeynaya ugu yaraan lix bilood. Dhanka kale, waxaa sidoo kale jira dadka wata baasabooro aan caadi aheyn sida siyaasiyiinta. Sababtan awgeed talaabadan had iyo jeer hubi inaad haysato codsi shaqo oo wanaagsan. Fadlan calaamee dokumentiyada socdaalka ee u baahan in ay u guuraan Dubai. Sida laga soo xigtay Emirates sidoo kale waxay leeyihiin shuruudo kala duwan oo loo galo dadka shaqo doonka ah. Xaaladahaas oo kale, tallaabadan fadlan ka hubi sidoo kale wareysiyada socodka ee Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad dalbato fiiso si aad ugu qalanto inaad gasho UAE. Sidoo kale, aqri Baasaboor kale shuruudaha UAE.
Tallaabada No.3 Hubi noocyada fiisada
Tallaabada No.3 waxaan u baahan nahay si loo ogaado nooca fiisaha aan haysan karno. Tusaale ahaan, waxaan haysan karnaa - Dal-ku-gal dal-ku-gal oo waqti-dheer ah oo loogu talagalay 90 maalmood. Iyo fiisada shaqada ee Dubai. Iyo sidoo kale maalmaha 30 iyo maalmaha 14 ujeedo fasax fudud. Markaad tixgaliso qodobbadaas, booqo dowladda.ea bogga rasmiga ah. Bal fiiriya fiisaha aad ka heli karto iyo waxa ku saabsan oo dhan. Bellow, waad heli kartaa jid gaabin muddo fiiso ah.
Waa maxay maamule aniga i haysta, mise waxaan u baahanahay fiiso Dubai? intaanan tegin ?. Dhammaan su'aalahaas oo aad ka heli karto websaydhka dawladda.ae. Waxaad haysaa dhowr ikhtiyaar, iyo waa inaad haysataa gabal macluumaad faahfaahsan. Gaar ahaan midka ugu wanaagsan wuxuu ka yimid ilo wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo. Oo ma jiro wax ka badan oo lagu kalsoonaan karo oo ka badan Dowladda UAE. Waad awoodaa raadso macluumaad kale oo la xidhiidha shaqo raadintaada Dubai iyo Abu Dhabi. Sababtoo ah website-ka dawlada.ae ka caawinta booqashada cusub ee MBA inay joogaan oo ka shaqeeyaan UAE.
Dalxiisayaasha muddada dheer ee Visa - aad u sareeya lagula talinayaa shisheeyaha cusub !.
Fiisaha dalxiis ee 30, oo loo kordhin karo maalmaha 40 - laguma talinayo shaqo raadiska.
Fiisaha adeegga 14-maalin, kaliya loogu talagalay ciidaha loogu talagalay ajaanibta.
30-day Fiiso booqasho, oo loo kordhin karo maalmaha 30.
Tallaabada No.4 Hadda waxaad dalban kartaa fiiso ka hor intaadan u guurin Dubai
Hagaag, hadda waanu ognahay hadaad gasho Dubai. Waad ogtahay waxa ku saabsan fiisaha xitaa haweeney u dhalatay. Tallaabada xigta waa in aan raacno. Ballan fiiso si aad u gasho Imaaraadka Carabta. Shirkadeena baaritaan dheer ayey ku sameeyeen arintaas. Qaabka ugu fudud ee ballansan waa nidaamka fiisaha ee Etihad UAE. Dhinaca togan, haddii aad ka timid waddamada kana socda Imaaraatka Carabta Liiska Dowlada. Guud ahaan marka loo hadlo, uma baahnid fiiso kahor intaysan soo gelin Imaaraatka. Tusaale ahaan, haddii aad degto Garoonka Diyaaradaha Abu Dhabi. Dhowr daqiiqo gudahood, shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa sii wad nidaamka socdaalka adiga. Isla daqiiqadana waxaad heli doontaa fiiso markii aad timaadid.
In kasta oo aan duulayo Etihad Ma u baahanahay a fiisaha Dubai?. Maadaama aad kaliya qorsheynaysid inaad duuleyso uma baahnid inaad haysato fiiso. Markaad ballansato duullimaad, ka dib waad u baahan tahay. Laakiin dhinaca togan, waxaad ka sameyn kartaa shabakadda. Taasi dhib malahan xitaa si loo bilaabo shaqooyinka ammaanka ee UAE.
Laakiin sidoo kale waxay eegaan bogag kale. Noqo mid caqli badan oo qiimeeya qiimaha.
U soo guurista Dubai Etihad UAE bogga dalbashada fiisaha
AirArabia dokumentiyada iyo fiisada
Emirates adeegyada fiisooyinka ka hor intaadan u duulin Dubai
FlyDubai waxay u guurtay Dubai Caawinta fiisaha ee UAE
Tallaabada No.5 Hel meel aad ku degto Dubai
Kahor intaadan aadin Dubai. Waxaad ubaahantahay raadinta iyo in diirada la saaro guryaha dabaqyada ah ee laga isticmaalo Dubai. Sababtaas awgeed, waa inaad raadsataa qol aad u jaban. Intaa waxaa dheer, qolka ballaadhan ma aha Nooca aad heli doontid si aad u qaadatid. Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad guurto adigoon qaadan reerkaaga. Waqti fog, waxay abuuri doonaan kaliya kharashyo. Bilowga hore, waxaad u baahan tahay inaad lacag dhigato markaad u guurto Dubai. Gaar ahaan laga bilaabo dalalka sida Malaysia ama Hindiya. Ku bixi kharashka yar ee aad ku heli kartid qolka ama qolka. Waxaad u baahan tahay inaad raadiso deegaan la wadaago. Waxaad wici kartaa milkiilayaasha guriga ama xiriirka email. Hubi inaad haysan doonto wax walba oo meel. Ka hor waxaad u guuri doontaa Imaaraadka. Sidoo kale, talooyin wanaagsan ayaa ah in la raadiyo qol ka mid ah Abu Dhabi iyo Shareecada. Waxaa jira guriyaal raqiis ah oo aad kireysato.
Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai? Haa, waxaad u baahan doontaa, oo waxaa jira caarad. Si aad u hesho fiisada shaqada ee deg dega ah. Laga yaabaa in aad u dalbadaan Maareynta Maareynta ee UAE. Sababtoo ah sidan ayaad u kordheysaa markaad hesho guri fiican. Sababtoo ah shirkaduhu waxay maalgelin doonaan lacag badan inaan ku shaqaaleysiiyo. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, suurtagalnimada hoy cusub waxay noqon doontaa heshiiska dhabta ah.
Tallaabada No.6 U guurista Dubai iyo duulimaadka dhimista Bookka Dubai
Waxaan wada ognahay in duulimaadyadu aysan raqiis ahayn shaqooyinka cusub ee shaqo doonka. Sidaa darteed iskuday inaad kharashkaaga ka dhigto mid aad u hooseeya intii aad karto. Raadi duullimaadyo dhimis ku tegaya Dubai. Dhanka kale, Dubai wali waa dhulka ugu weyn Shaqooyinka bannaan ee Bariga Dhexe. Laakiin waad raadin kartaa duullimaadyada sidoo kale taga Abu Dhabi. U guurista Dubai had iyo jeer waa qaali. Si kastaba ha noqotee waxaad raadin doontaa qaybo talo bixin ah. Dhinaca taban, waxaad u baahan doontaa inaad xoogaa lacag dhigato. Sababta oo ah markii aad soo degtid UAE. Waxaad u baahan doontaa inaad meel ku haysid. Ku noolaanshaha Imaaraadka Carabta. Maaha heshiis raqiis ah oo la qaato.
Tallaabada No.7 Hadda yimid hada diyaar u noqo mobile!
Tan iyo markii aad timid garoonka diyaaradaha Dubai. Waxaad ubaahan tahay inaad diyaar u noqotid telefoonkaaga gacanta si aad u raadsato shaqo raadinta. Sababtan awgeed, waxaan ku hagaynaa wax yar. Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa ah labada adeeg oo ugu muhiimsan adeegayaasha moobaylka. Waxay diyaar u yihiin dhammaan dadka ajnabiga ah. Etisalat iyo du, labaduba waa fiican yihiin adiga oo ah ajaanib cusub markaad u soo guurto Dubai. Dhammaan waxay ku xidhan tahay waxa aad u baahan tahay si aad u maamusho adeegga moobaylka ee hore loo bixiyo.
Ma jiro kala duwanaansho badan marka loo eego mobiilka gudaha UAE. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada hawl wadeen waa labada shirkadood ee guur-guura. Wuxuu dacweeyaa isticmaalayaasha kaliya kan labaad. Dhanka kale, Etisalat waxay ku dallacdaa daqiiqad kasta isticmaale kasta. Laakiin uma baahnid inaad walwasho. Labada hawl-wadeennada mobilada ayaa lagu xukumay nidaam iyo keydin loogu talagalay dadka isticmaala. Talooyin kale ayaa ah in aysan ka shaqeynayn kaliya UAE. Waxa kale oo jira wax badan oo Kuwait ka shaqeeya Kuwait kuwaas oo hadda isticmaalaya.
Haysashada telefoon ma u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai? Haa ... halkan waxaad ku leedahay hawlwadeenada 2.
Etisalat telefoonada gacanta ee Dubai
Du Duub gacmeedka Dubai
Tallaabada Lambarka 8 Diyaarinta Resumeygaaga iyo Dukumintiga Daboolka ee Dubai
Maamuleyaasha shaqada Magaalada Dubay oo raadinaya CV kasta. Laakiin dhinaca taban ee ku xeeran 2-5 labaad ee Resume kasta. Marka waxaad ubaahantahay inaad lahaato resume la yaab leh oo aan fiicneyn si aad u faahfaahinto faahfaahintaada xirfadeed. Erayo kooban, CV-gaagu waa inuusan ka badnaan bogagga 2-3. Resumeygaaga qumman yahay waa inuu kujiro kaliya macluumaad xirfadle. Aasaaska dib uhabaynta qoraalka ayaa waxaa soo daabacay Forbes.com Waxaa jira dood weyn oo ku saabsan dadka shaqo doonka ah ee 2018 iyo 2019. Maxay tahay in lagu sameeyo qoraalka dib-u-dejinta iyo waxa aan ahayn in dambe ee maqaalkani.
Laakiin waxaa jira qaar ka reeban qorista CV. Tusaale ahaan, haddii aad tahay codsashada meel heer sare ah oo ku yaal Dubai. Waxaa jira dariiqa u gaarka ah ugaadhsade xirfadle kasta. Inta badan, haddii duruufaha jiraan Shaqo ayaa loo baahan yahay. Waa inaad ku fidiso resumeygaaga illaa bogagga 3. Waqti ka waqti qaar ka mid ah wadamada adduunka. Haysashada hab iyaga u gaar ah oo ay ku abuuraan dib u soo celinta. Qaar ka mid ah CVga guud ahaan kuhadlkiisa ayaa aad u gaaban. Waa inaad sidoo kale eegtaa Forbes ee Bariga Dhexe si deg deg ah hagaha dadka shaqo doonka ah.
Dhinaca kale, waxaad kireeysan kartaa qorayaasha xirfadleyda qoraalka CV. Tusaale ahaan Qorayaasha qorayaasha CV. Waxaad u shaqaaleyn kartaa $ 30 si aad u qorto qoraaga CV. Laakiin haddii ay kugu habboon tahay adiga. Waxaad awoodi kartaa hel CV cusub marka loo eego $ 5 on Fiverr.com. Waxaa jira habab badan oo sida ugu habboon loogu heli karo CV-gaaga. Laakiin adigu waad qori kartaa adigu. Hoos waxaad ka helaysaa Independent.co.uk Tilmaanta faahfaahsan sida loo sameeyo hab saxda ah.
Tallaabada Lambarka 9 Abuurista qaababka bulshada
Kahor intaadan aadin Tallaabada xigta oo bilaabi inaad u dhaqaaqdo Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad abuurto astaan ​​bulsho oo xirfadle ah. Shirkaddayadu waxay abuurtay liis dhammaystiran. Ilaa iyo inta sharaxaad faahfaahsan laga bixiyo ee Xariir shaqaale kasta. Intaa waxaa dheer, waxaan dejinay sharikadaha warbaahinta bulshada ee aadka loo qiimeeyo ee Dubai. Meesha aad ubaahantahay inaad bilaawdo abuurida astaan ​​kuu gaar ah. Ma jiro sixir furaha shaqooyinkaaga raadinaya ajaanibta. Iyadoo la raacayo tallaabadan, waxaad u baahan tahay inaad si aad u faahfaahsan u sameyso bog kasta. Sidaa daraadeed u sax markaad u gudubto finalka soo socda geedi socodka shaqadaada. Miyaan u baahanahay fiiso loogu talagalay Dubai? xitaa LinkedIn?
Hagaag, waxaad ka heli kartaa shirkado badan. Tusaale ahaan, Emirates Group waa shaqaaleysi on Linkedin. Dhanka kale, shirkadaha baabuurta oo raadinaya faallo. Waxaa jira ku dhowaad fursado aan dhammaad lahayn oo qof kasta loo helo. Marka, shirkadeena waxaan kula talineynaa dadka shaqo doonka ah inay lahaadaan astaan ​​aad u xoogan. Sababta oo ah xaqiiqda, waxaad isweydiin kartaa naftaada miyaan u baahanahay fiiso Dubai? Iyo ka dib fursad ayaa ku soo socota. Oo waxaa laga yaabaa in lagu daayo iyada oo aan waxba.
Talaabada No.10 Isticmaalka Shirkadda Dubai City
Shirkadda Dubai City waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino inaad u guurto Dubai!. Iyada oo la yaab leh adeegyada qorista. Waxaad si xaqiiqo ah u haysan doontaa mihnadda riyada ee UAE. Sida xaqiiqda ah, ujeedkeenu waa inaan kaa caawiya in lagu dhigo Dubai. Hadafkayaga ugu dambeeya waa inaan maareyno shaqo raadintaada. Laakiin waxaan rajeyneynaa taas waad adeegsan doontaa adeegeena. Adiguna waad jeclaan doontaa kooxdayada. Adeegyada aan bixineyno runtii waa kuwo waxtar leh. Xaqiiqdii, dhammaantood waa bilaa lacag.
Si fiican u yaqaanno shirkadda Dubai ee shaqaalaha caalamiga ah. Caawinta in kabadan konton kun oo shisheeyaha cusub si ay u noqdaan shaqaale. Bixinta talooyin iyo jawaabo bilaash ah. Tusaale ahaan, waxaan u baahanahay fiiso imaanshaha Dubai, ama sida shaqo looga helo Dubai iyo goob shaqo oo sharci ah?. Dhammaan wixii aan kuu qaban karno.
La xiriir shaqaalaha iyo shaqaaleynta shaqaaleynta
Linkedin ayaa leh bulsho shaqaaleyn badan. Shabakada warbaahinta bulshada dhexdeeda, waxaad kula xiriiri kartaa kuwa qora kuwa aan tooska aheyn. Dhanka kale ka Dubai aragti shaqo doonka. Waa habka ugu fiican ee loo helo shaqo. Adeegsiga adeegeena si sax ah waxay kaa caawineysaa inaad la xiriirto shaqaaleynta maamulayaasha. Adeegyadeena, waxaad kula xiriiri kartaa in ka badan 5,000 maamuleyaal shaqaale qorista ee Magaalada Dubai. Xaqiiqdii waa inaad ku xirnaataa adduunyo qorayaasha warbaahinta bulshada. Raadinta shaqo cusub ee ereyga madaxa shirkadaha. Waa hab aad u caqli badan.
Adeeggeena LinkedIn, waxaad hubaal ka dhigan kartaa xirfaddaada. Labada fursadood ee labadaba helitaanka fursado shaqo oo ku habboon Emirates. Isla markiiba haddii aad si firfircoon u raadinayso cusub shaqo ama fursad shaqo ama aad mustaqbalkaaga ku haysan kartid UAE.
WhatsApp Kooxaha Shaqooyinka ee Dubai
Xaqiiqdii waad raadin kartaa shaqo. La yaabka ee Bariga Dhexe. Ku biir kooxaha WhatsApp-ka safka hore. Ku dar nambar taleefankaaga moobiilka maamulayaasha shaqaaleynta. La xiriir dadka kale ee shaqo doonka ah, qurbaha, iyo maamule xirfadlayaal ah. Guud ahaan kuhadalku waa kuwa dhiiran. Ku shaqo ka raadso Imaaraadka Carabta.
Shirkaddayadu waxay abuurtay dhowr kooxo oo ah shaqo doonka. Ilaa iyo hada kooxaha xadidan ee WhatsApp. Laakiin waxaan rajeyneynaa inaad awoodi doontid inaad ku soo dhejiso dalabkaaga shaqo qorista. Intaa waxaa sii dheer, kooxdayada shaqaalaynta ayaa noqon doonta in ka badan faraxsan si ay kaaga caawiso inaad shaqo ka hesho Saudi Arabia. Haddii aad ka hesho shaqo shaqo mid ka mid ah kooxdeena. Marka, hadda, waxaan sugeynaa faahfaahintaada xirfadeed. Marka la eego waayo-aragnimada macaamiisha shakhsiyeed fadlan ha dhajin faallooyinka spam.
U dir Resired hay'adaha shaqaalaynta ee Dubai
Shirkadda Dubai City, hal shay, waxay dejisay dhamaan shirkadaha shaqaalaysiinta ee Dubai. Hadda waad diri kartaa CV-gaaga. Ku shirkadaha shaqaalaynta ee ugu sareysa Dubai. Waxaad kaloo fiirin kartaa halka ay ku saleysan yihiin. Si laguu caawiyo, si aad u dhakhso badan u shaqeyso. Waxaan ku dhejinay email iyo telefoon lambar. Dhinaca dhinaca wanaagsan haddii aad isticmaalayso liiskan wakiilada shaqaalaynta si sax ah. Dhab ahaantii, Waxay kaa caawineysaa sidii aad uga heli lahayd shaqada riyada ee Imaaraadka Carabta. Dib u dhac la'aan, waxaad u baahan tahay inaad cusbooneysiiso qorayaasha iyo shaqaaleynta shaqaaleynta. Inaad tahay furan fursado shaqo oo cusub oo Dubai ah.
Talaabooyinka lagu helo shaqo ahaan khibrad ahaan
Ma u baahanahay fiiso Dubai? tallaabooyinka loo helo shaqo sida khabiir?. Waxaan rajeyneynaa inaad hada heysato tilmaan faahfaahsan si aad uga shaqeyso Dubai. Ma u baahanahay fiiso Dubai? laga bilaabo AZ Steps ilaa helitaanka shaqo sida Qurbaha. Soo ogow sida aad ugu baahan tahay fiiso, duullimaadyo, iyo hoy UAE. Waxaan rajeyneynaa intaas oo dhan xabbadood oo macluumaad ayaa la siiyaa macluumaad kugu filan. Sababtoo ah waxaan haysanaa waxyaabo badan oo aan soo bandhigno. Ha iloobin taas waxaad ka heli kartaa shaqo Bangiga iyo shirkadaha maaliyadeed. Iyo waxay bixiyaan ruqsadda shaqo ee fiisada UAE.
Shirkadda Dubai City ayaa hadda bixinaysa xarun wicitaan oo wanaagsan Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, adiga oo tan maskaxda ku heysa, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.